Iri mkpụrụ osisi niile na agba ọzọ na Mkpụrụ ọhụrụ Ninja 2 | Gam akporosis
Mkpụrụ Ninja 2 na-alaghachi mgbe ntinye nke mbụ karịa 10 afọ gara aga
Onye ga-ekwu ya anyị na-egwu egwuregwu n'ihi na ihe karịrị 10 afọ ya na nkpuru mbu Ninja na gam akporo ma weputara ya ugbua Mkpụrụ Ninja 2 iji weta ihe ọdịnaya, mma agha, ụdịdị na ndị ọzọ
Egwuregwu sitere na Halfbrick Studios na nke ahụ, ọ bụ ezie na n'ụdị mbụ ya ọ na-atụtụ ọtụtụ chinchi, ọ ka bụ onye ọ bụ iji nye ndị ọzọ egwuregwu ihe ọchị gburugburu ụwa. Gaa maka ya.
1 Bee mkpụrụ osisi na-enweghị ịkwụsị na Mkpụrụ Ninja 2
2 Anakọta akụkọ ifo pupụtara na ngwa ngwa
3 Kpachara anya maka bọmbụ ndị ahụ
Bee mkpụrụ osisi na-enweghị ịkwụsị na Mkpụrụ Ninja 2
A hapụrụ mkpụrụ osisi Ninja karịa afọ 10 gara aga, kpomkwem na Eprel 2010 na nke bu eziokwu bu na igwu site na mkpanaka a agbanweela otutu. N'agbanyeghị nke ahụ, igwu egwuregwu mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na mkpịsị aka anyị ghọrọ katanas, ọ bụ ihe na-emetụ anyị n'ahụ maka ọtụtụ ọnwa.
Lee, ọ na-abịaghachi ọzọ na otu egwuregwu ka ọzọ mkpịsị aka anyị dị nkọ iji belata melons abụọ na kụrisịa iberibe dum n'otu ụzọ. Egwuregwu nke na-emeju anụ ọhịa anyị kachasị mma site na ibelata nkebi ma si otú ahụ na-agbakọtakwu isi.
Ma ọ bụ na na Mkpụrụ Ninja 2 ihe dị mkpa bụ bụrụ ọkachamara dị ka o kwere mee ịrụ combos na iti nke anyị highscore ndekọ. Karịsịa na ọnọdụ arcade ebe anyị na-eti onwe anyị ka anyị gbalịa ịghara ịhapụ mkpụrụ ọ bụla n'amaghị etu ọnụ anyị dị.
Anakọta akụkọ ifo pupụtara na ngwa ngwa
Ọ bụ eziokwu na Halfbrick Studios akụghị agbaji oyibo nke ukwuu iji weta nkeji nke abụọ site na mkpụrụ osisi Ninja. Eziokwu bụ na ịchọghị ya iji weghachite adrenaline ahụ dị ọcha nke na-eme n'ime ahụ anyị mgbe anyị malitere ịme ngwakọta mgbe ngwakọta ọzọ.
E kwuwo ya mgbe niile mgbe ihe na-arụ ọrụ ịkwesighi ịgbanwe ya, na nke a bụ isi nke Fruti Ninja maka onwe ya iji weta ụdịdị ọhụrụ, mpempe akwụkwọ akụkọ na-akọkarị akụkọ iji mepụta ụdị mmetụta niile na nzụlite ndị ahụ na-akpọrọ anyị gaa ebe niile dị iche iche iji gosipụta nka anyị nwere na mkpịsị aka anyị.
Anyị nwekwara lgba ndị ga-eduga anyị iti ndị egwuregwu ndị ọzọ, dịka anyị nwere ike taa ndị egwuregwu ndị ọzọ dịka ndị ezinụlọ anyị na ndị ọrụ ibe anyị. Yabụ, ihe niile na-anọgide n'ụlọ na-enwe a dum Arcade na nke aka meziri bulie a Mkpụrụ Ninja ka ebube.
Kpachara anya maka bọmbụ ndị ahụ
Ma n'ezie, ndị bọmbụ dị ugbu a na egwuregwu arcade nakwa na anyị ga-ezere ihe ọ bụla na-efu ka ha ghara iwepụ mkpụrụ osisi ndị ahụ anyị kwesịrị ịtinye isi ihe. Akụkụ kachasị mkpa nke Mkpụrụ Ninja ka dị ugbu a maka egwuregwu ga-aga n'ihu na-egwu ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa.
Anya jisie ike na agba ndị ahụ niile doro anya, ụdị mkpụrụ osisi ahụ ya mere organic na nyocha ndị ahụ na mma agha anyị nke ga-ewega anyị oge juputara na nsonaazụ anya; tumadi na unere di iche iche nke n’enye ohere ime ka ngharia ma obu me ka otutu nkpuru puta iji gbue ya na saber anyi. Ihe ọma niile dị na nke a, ọ bụ ezie na anyị chọrọ ka ha weta ihe ọhụụ na bọọdụ igbutu nke bụ Mkpụrụ Ninja 2.
Ya mere, anyị ga- Mkpụrụ Ninja 2 dị ka nnukwu arcade nke mkpịsị aka gị bụ mma agha dị nkọ na nke ị nwere ike iji nwee ọganihu iji bụrụ otu n'ime ndị nwere ọgụgụ isi na mbara ụwa. N'ezie, freemium dị ọcha ịga n'ihu.
Halfbrick Studio na-aga n'ihu ịkụ nzọ na Mkpụrụ Ninja iji wetara anyị ụdịdị ọzọ na nkeji nkeji nke abụọ na ihe ọ juiceụ juiceụ niile nke mbụ.
Usoro edemede: 7
Obi dị gị ụtọ iji mkpịsị aka gị kụrisịa mkpụrụ osisi
Vdị dịgasị iche iche na ọdịnaya
Na-a hoụ ọtụtụ
Anyị enweghị ụfọdụ ọhụụ ebe ọ bụ na usoro arcade dị ka otu mkpụrụ osisi Ninja
Mkpụrụ Ninja 2 Egwuregwu Egwuregwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mkpụrụ Ninja 2 na-alaghachi mgbe ntinye nke mbụ karịa 10 afọ gara aga
Ihe niile banyere 1080nm Exynos 5, Samsung ọhụrụ chipset nke kwere nkwa
Kedu ihe bụ ozi WhatsApp nwa oge (na otu esi arụ ọrụ ha) adịlarị